मुख्य समाचार – Page 545 – JanaSanchar.com
लोकमानसिंहले सरकारी निवास छाडे
काठमाडौं, २८ पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निवर्तमान प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की बिहीबार अपरान्ह सरकारी निवास छाडेका छन् । लोकमानको परिवार अपरान्ह सरकारी निबासबाट बाहिरिएका हुन् । उनी अख्तियारको सवारीसाधन त्यही छाडेर निजी गाडीमा बाहिरिएका छन् । उनको सुरक्षाका लागि सई उत्तम भण्डारी नेतृत्वको प्रहरी टोलीसहितको..
‘आधार इलाका’मा आक्रोश, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई रोल्पामै अवरोध
दाङ, रोल्पा, रुकुम र डोल्पा जोड्ने निर्माणाधीन सहिद मार्गको अवलोकन गर्न ९ पुसमा रोल्पाको घर्तीगाउँ आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’प्रति आक्रोशित स्थानीयले कालो झन्डा देखाए । संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै स्थानीयले उनको अक्षमताविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरे । नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट घर्तीगाउँ आएका..
महासेठकाे प्रश्न- ‘प्रचण्डजी हाम्रो प्रधानमन्त्री हो की कसैबाट निर्देशित ?’
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेता रघुविर महासेठले सरकारले संविधान संशोधन विधेयकको नाममा चुनाव नगर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए। बिहीबार राजधानीमा रिपोर्टस क्बलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासेठले भने, ‘सरकार कहाँ छ ? नेपालमा हो कि बाहिर छ ?, प्रचण्डजी सही अर्थमा हाम्रो प्रधानमन्त्री हो कि वा कसैबाट निर्देशित हो ?’ उनले मधेसी..
सर्वोच्चको आदेश बिपरित प्रहरीद्वारा घरखालि !
घरजग्गामा हक कसको हुने विषयमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत प्रहरीले घरनिकाला गरेको दाबीसहित ललितपुरका एक घरधनीले सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन् । घरमा ताल्चा लगाएर पटकपटक धरपकड गरेको आरोपसहित ललितपुर जिल्ला प्रशासन र सुरक्षाकर्मीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको हो । ललितपुर उपमहानगरपालिका-१५..
काठमाडौं, २८ पुस । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका छन्। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने तयारी भएको छ। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ। सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन पनि..
भारतसंग प्रचण्डले गरे अर्को सम्झौता, बिरोधमा उत्रिए नारायणकाजी
सरकारले काम नगर्ने भारतीय कम्पनीको ठेक्का अवधि थपेपछि सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रै विरोध भएको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको आर्थिक स्रोत ब्यबस्था गर्नका लागि एक वर्षको समय पाएर पनि कुनै काम नगरेको भारतीय कम्पनी जीएमआरको अवधि फेरि १ बर्षको थपेपछि माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ..
सरकारले सार्वजनिक विदा पुनरावलोकन गर्ने
काठमाडौं, २७ पुस । सरकारले सार्वजनिक विदा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । पृथ्वी जयन्तीमा विदा दिनु पर्ने माग मन्त्रीहरुले पटक पटक उठाएका थिए । तर, सरकारले कुनै निर्णय गरेन । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कुन दिवसमा राष्ट्रिय र कुन दिवस तथा पर्वमा प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमा विदा दिने भन्ने सुझाव दिन गृह मन्त्रालयलाई भनेको छ..
पुननिर्माण प्राधिकरण सिईओ ज्ञवाली बर्खास्त, डा. पोख्रेल नियुक्त
काठमाडौं, २७ पुस । सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट सुशील ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेर डा. गोविन्द पोख्रेललाई नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पोख्रेललाई प्राधिकरणको सिईओमा नियुक्त गरेको हो । प्युठान रस्पुरकोट निवासी डा. पोख्रेललाई..
रेडक्रसले रित्यायो भूकम्पपीडित कोष
राहत, उद्धार तथा पुनस्र्थापनामा सक्रिय नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले भूकम्पपीडितका नाममा संकलित रकम चरम दुरुपयोग गरेको खुलेको छ। रेडक्रसले भूकम्पपीडित कोषको रकम कार, मोटरसाइकल, स्कुटरजस्ता सामग्री खरिद र कर्मचारी तलबभत्तालगायत शीर्षकमा जथाभाबी खर्चिएको फेला परेको हो । नागरिकले प्राप्त गरेका कागजातअनुसार विभिन्न दाताले पुनस्र्थापना..
नेपाल एकीकरण क्रममा युद्ध लड्न बनाइएका गढी, किल्ला र कोटहरू संरक्षणविहीन छन् । सरकारले ऐतिहासिक गढी संरक्षणमा चासो नदेखाउँदा सामरिक महत्व राख्ने गढी अवशेषमा सीमित छन् । कतिपयको त अवशेष पनि हराउने अवस्था छ । काठमाडाैं, दहचोकस्थित नौवटा ऐतिहासिक गढी जीर्ण हँुदै गएका छन् । दहचोक गढीमा पृथ्वीनारायण शाह आफैं बसेका थिए । गढीमा रहेका..